सार्वजनिक सवारीसाधनमा दशैँ मान्न निस्कनुभएको छ ? अपनाउनुहोस् यी उपाय - Safalnews- News Portal from Nepal in Nepali.
सफल न्युज द्वारा २०७८ आश्विन २९ गते शुक्रबार १२:१३ मा प्रकाशित
काठमाडौं । तपाईँ सार्वजनिक यातायातबाट यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ ? कोरोनाको महामारीका बीच आएको दशैँ, तिहारजस्ता पर्वहरूमा सवारीसाधनमा अत्यधिक यात्रु हुनेभएकाले सावधानी अपनाउनुपर्ने भएको छ । कोरोना भाइरस फलाम वा फलामजन्य वस्तुमा लामो समय जीवित रहन्छ भन्ने कुरा विभिन्न अनुसन्धानले बताइसकेको छ ।
कोरोना भाइरस बस र मेट्रोट्रेनमा धेरै समयसम्म जिउँदो रहने अध्ययनको दाबी छ । केही समयअघि भएको एक अध्ययनअनुसार एयर कन्डिसन बस र मेट्रो ट्रेन वा अन्य सवारीसाधनमा कोरोना पोजिटिभ व्यक्तिको साथमा यात्रा गर्नु तपाईँलाई समस्या बन्न सक्दछ ।
चाइनिज सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल (सीडिसी)का अनुसार केही शोधकर्ताहरूले मिलेर एक रिपोर्ट प्रकाशित गरेका छन् । उक्त रिपोर्टका अनुसार वार्ता गरिने ठाउँबाट पनि हावाको माध्यमबाट कोरोना सर्नसक्ने र कोरोना पोजेटिभ मानिस भएको ठाउँ र ऊ बसेको ठाउँमा पनि ३० मिनेटसम्म जिउँदो रहनसक्ने बताइएको छ । साथै संक्रमित व्यक्तिभन्दा टाढा ४-५ मिटरसम्म कोरोना फैलिन सक्छ ।
चीनको हुनान प्रान्तमा भएको यो शोधमा १५ जना मानिसहरूलाई सामेल गरिएको थियो । ती सबै जना एक बसमा यात्रा गरिरहेका थिए । बसमा बसेका बिनामास्कवाला एक व्यक्तिको माध्यमबाट १५ मध्ये २ जनालाई कोरोना भाइरसको संक्रमण देखा परेको थियो । अझ बिनामास्कका उक्त व्यक्ति बसबाट झरेपछि ३० मिनेटसम्म कोरोना त्यहाँ रहेको थियो ।
विश्वभर नै भयावह रूपमा फैलिँदै गरेको कोरोना भाइरसको विषयमा विकसित देशहरूले ठूलो जनशक्ति खर्चिएर औषधि पत्ता लगाउन खटिरहेका छन् । अहिले खोप उपलब्ध भए पनि यो दिगो समाधानको उपाय भने होइन । हालसम्म यसको पूर्ण औषधि पत्ता लागेको छैन ।
गत डिसेम्बर अन्तिम साता चीनको हुवेई प्रान्तको वुहान सहरबाट फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण विश्व आक्रान्त भएका बेला यसको असरबाट नेपाल पनि मुक्त हुन सकेको छैन । बरु संक्रमण दिनानुदिन बढिरहेको छ । विश्वलाई आक्रान्त पारेको कोरोनाको महामारीले विश्व अर्थतन्त्रमा निकै ठूलो धक्का पुगेको छ । विकासशील देशहरू यसको चपेटामा नराम्ररी परेका छन् । मानिसको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रँदो छ ।
चिकित्सकहरूका अनुसार यो भाइरस अत्यधिक संक्रामक छ ।
भाइरसबाट संक्रमित व्यक्तिको सिँगान, खकार, थुक आदिजस्ता शरीरका तरल पदार्थबाट यो भाइरस सर्ने चिकित्सकले बताएका छन् । संक्रमित व्यक्तिले हाच्छिउँ गर्दा, खोक्दा, थुक्दा, संक्रमितले फेरेर श्वास, सिँगान, खकार, उसले प्रयोग गरेका सामान, दिसापिसाब आदिमा यो भाइरस रहन्छ । हावामा मिसिने र बिरामीको सम्पर्कमा भएका व्यक्तिहरूमा श्वासप्रश्वासको माध्यमबाट सर्ने हुन्छ ।
हावाको माध्यमबाट,प्रत्यक्ष सम्पर्क (हात मिलाउने, अंकमाल गर्ने, छुने आदि), भाइरस भएका वस्तु छोएर आफ्नो आँखा, नाक, मुख छुँदा कोरोना भाइरसको संक्रमण हुनसक्छ । त्यसैले यस्ता कुरामा सावधानी अपनाउनुपर्छ ।
रुघा लाग्ने खोकी लाग्ने
छाति दुखेजस्तो हुने, स्वाद थाहा नपाउने, थकाइ लाग्ने
सुख्खा खोकी लाग्ने
घाँटी, टाउको तथा जिउ दुख्ने
तर धेरैलाई लक्षणबिना नै कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । यसकारण हरेक व्यक्रिलाई संक्रमितको नजरले हेरी आफू सावधान र सचेत रहने ।
– मास्कको प्रयोग गर्ने
– खोक्दा र हाछ्युँ गर्दा नाक र मुख छोप्ने
– नियमित साबुन पानीले हात धुने र हातमा अल्कोहलजन्य सेनिटाइजर दल्ने
– जङ्गली तथा घरेलु पशुपंक्षीसँग सोझै सम्पर्कमा नरहने
अथवा घरमा आइसोलेसन बस्ने
– सार्वजनिक जमघटहरूमा कम उपस्थित हुने
पोखरामा हुने भनिएको प्रेस चौतारीको महाधिवेशन स्थगित
लुम्बिनी विकास बैंकद्धारा सहारा एकेडेमीलाई २ लाख ४३ हजार सहयोग
पश्चिमाञ्चल क्याम्पसको वैज्ञानिक कार्यशाला सम्पन्न
पिडित जिसीलाई सहयोग गर्न परिवारको अपिल
पाँच हजार ७४७ जना नयाँ सङ्क्रमित थप, तीनको मृत्यु